यस्तो छ दीपिकाको बेडरुम - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / मनोरञ्जन / यस्तो छ दीपिकाको बेडरुम
By Digital Khabar on September 6, 2017
भाद्र १६, २०७३-धेरैलाई चासो छ– बलिउडकी नम्बर–१ हिरोइन दीपिका पादुकोणको बेडरुम कस्तो होला ? कस्तोखाले पलङ र कोठामा सुत्छिन् होली उनी ? उनको बैठक कक्ष र स्टडी रुम कस्तो होला ? जान्न र देख्न नचाहने सायदै कोही होला ।
दीपिकाको ‘फोर–बीएचके’ अपार्टमेन्ट २ हजार ७ सय ७६ स्क्वायर फिट फराकिलो छ, जसलाई चर्चित इन्टेरियर डिजाईनर विनिता चैतन्यले निकै आकर्षक ढंगमा सजाएकी छन् । दिपिकालाई मनपर्ने सेतो, पिंक, सुनौलो र रातो रङ नै उनको अपार्टमेन्टमा पनि प्रयोग गरिएको छ । अपार्टमेन्टका भित्ता, फर्निचर, सजावट सामग्री, कपडा र कार्पेट जस्ता वस्तुहरुको रंग पनि सोही अनुसार छनोट गरी उनका कोठाहरु सजाइएका छन् । उनको अपार्टमेन्टमा तीन वटा बेडरुम, स्टडी रुम र लिभिङ रुम छन् ।
२ दिपिका पादुकोण
दीपिकालाई जितिन् कट्रिनाले
दीपिका भाग्य र परिश्रमले सफलता
कति छ सलमान,अमिताभ,शाहरुख र दीपीकाको सम्पत्ति ?,…
सुशान्तको फिल्ममा दिपिकाको आइटम डान्स
धेरै कमाउनेमा सारापोभा अगाडि
Related ItemsActessBollywoodBusinessdigital khabarDipika PadukonEntertainmentFilmInternationalmoviesMusicNationalNepalNewsPoliticsVideoWorld
← Previous Story दुइ रुपैया ट्रैलेर ( Dui Rupaiyan )
Next Story → अभिनेत्री श्रीदेवीको निधन